I-Adobe Shockwave iyacinywa kwi-Windows
Ukuba ukhulile nge-intanethi, ndiqinisekile ukuba uyazi malunga ne-Adobe Shockwave. I-plugin esiyifake kuyo yonke indawo ngexesha lokudlala izicelo ze-multimedia kunye nemidlalo yevidiyo. Ikhutshwe yi-Macromedia kwi-1995, kamva izuzwe ngu-Adobe kwi-2005, iqonga ...
Faka iiNkqubo ezivela kwiSitolo Kuzo zonke iiWindows 10 Devices
Ukufakela insiza kwiSitolo kwi-Windows 10 kulula. Ufuna ukuvula iphepha le-app kwi-App yoLondolozo uze uklibhoze iqhosha lokufumana ukulanda nokufaka ifowuni kwi-PC yakho. Kodwa kuthekani ukuba unamaPC amaningi ...
I-Firefox Thumela: Yabelana ngamaFayile ukuya kwi-2.5GB
Akukho nkunkuma yeenkonzo zokwabelana ngefayile. Enyanisweni, kukho ikhulu lokugcinwa kwefu kunye neenkonzo zokwabelana ngefayile ngeenxa zonke. I-OneDrive, i-Google Drayivu, i-Dropbox, kunye ne-iCloud Drive yindawo yokugcina ifayile kunye neenkonzo zokwabelana ngaphandle. I-Firefox Thumela i-Firefox Thumela i ...
Indlela yokudala iDemo ye-Lenovo USB Recovery Drive kwi-Windows 10
Kukho uncedo oluzakhelwe kwi-Windows 10 ukudala i-USB yokufumana imoto. Bonke abasebenzisi, kubandakanywa nabasebenzisi be-Lenovo PC, bangasebenzisa ithuluzi elakhelweyo ukulungiselela i-Windows 10 USB yokubuyisela idrayivu. Ingxaki kunye nenkonzo yokuphucula eyakhelwe kuyo kukuba ayikwazi ukudala ...
Ungasebenzisa ixesha elingakanani usebenzisa i-Microsoft Office ngaphandle kokusebenza?
Ufake ikopi engavumelekanga ye-Microsoft Office 2019 okanye i-Office 365 kwikhompyutheni yakho kwaye ufuna ukwazi ukuba ungasebenzisa ixesha elingakanani umkhiqizo we-Microsoft Office ngaphandle kokuyenza? Kule khokhelo, siza kuxubusha ukuba ixesha elingakanani lisebenzisa iMicrosoft Office ...
I-Google Matshi I-2019 Update Update: Iziphumo kunye neNyathelo ekufuneka ithathwe
I-Google ikhuphe ukuhlaziywa kwe-algorithm ngomhla we-12ti kaMatshi kulo nyaka. Yaye kunye nalo, kuza kwizinto ezininzi zokuqiqa malunga nomlinganiselo wempembelelo yayo, kwaye zeziphi izicwangciso kunye neziza ezichaphazelekayo. Kodwa ngaphambi kokuba sicinge ngaphakathi ...
I-Mozilla Firefox 66.0 Ikhutshwe nge-Sound Auto-Play ivaliwe
I-Mozilla Firefox 66.0 ikhishwe kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo. Ngoku itholakala kwiimpahla zokugcina ze Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10. Iziqhamo ezigqityiweyo zokukhutshwa kwe-Firefox 66.0: Vimba ukudlala komsindo ngokuzenzekelayo. Unako ukongeza okungafaniyo, okanye ukuvala umgca. Ukukhangela okulula ngokubhekiselele kwithebhu entsha kwiNgcaciso ...
I-Avidemux 2.7.3 Ekhutshwe nge-Fioder Fixes (Ubuntu PPA)
Umhleli wevidiyo u-Avidemux ukhulule i-version entsha ye-bug-fix nje emva kweentsuku ze-11 emva kokugqibela, kunye nokulungiswa kwezinto eziqhelekileyo kunye nokuphuculwa kwamancinci Avidemux 2.7.3 ukugqitywa kwezinto ezigqityiweyo: I-Vapoursynth ngoku ikhutshwe ngamandla ngokukhusela ukukhusela impazamo yokukhupha i-ASF / i-WMV i-demoler isilungiselelo se-BMP. Isisombululo esisisiseko sigcina kwangoku ...
Faka iNdaba yeCave ngokulula nge-Snap kwi-Ubuntu 18.04, 16.04
I-NXEngine Evo, ukuphinda kubhale kwakhona kwi-Storyic-scrolling game platformer Umdlalo weCave, ngoku kulula ukuyifaka kwi-Ubuntu Linux usebenzisa i-snap iphakheji. I-NXEngine Evo yi-clone epheleleyo evulekileyo / eyabhalwa kwakhona yesikhulumi se-masterpiece-jump-run-runer Doukutsu Monogatari (eyaziwa ngokuba yiCave Story) esenziwe yi-Studio Pixel. ...
KeePassXC 2.4 Ikhutshwe nge-High-DPI Scaling ye-4K Screens
Emva kokugqitywa kwe-beta ezimbini, umphathi wephasiwedi ye-KeePassXC i-2.4.0 ekugqibeleni uya kuzinza. Nantsi indlela yokuyifaka kwi-Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, nangaphezulu. I-KeePassXC i-2.4.0 yenza ulungelelaniso lwenkqubo yokukhawuleza ukubonisa ama-high-DPI, idibanisa idilesi entsha yedatha, isebenzisa uphando oluphambili, kunye nokuhlaziya ngokuzenzekelayo umhloli weenkcukacha ze-KeeShare ...
I-Kid3 I-Tag Editor 3.7.1 Ikhutshwe, Indlela yokufaka kwi-Ubuntu
Umhleli womculo we-Kid3 okhutshwe ngu-3.7.1 namhlanje. Nantsi indlela yokuyifaka kwi-Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10, nangaphezulu. I-Kid3 3.7.1 ngokuyinhloko izisa izilungiso ze-bug kunye nokuphucula ukusetyenziswa. Uninzi lweempawu ezintsha zijolise kwi-Android version, ekhoyo ngoku isekela umxholo omnyama, ngcono ...
[Iphulo elikhawulezayo] Hambisa iwashi ukuya kwelungelo lePhaneli ephezulu kwi-Ubuntu 18.04
Olu qeqesho olukhawulezayo luya kubonisa indlela yokuhambisa iwashi ukusuka phakathi ukuya kwesokudla kwipaneli ephezulu kwi-Ubuntu 18.04 Gnome Shell. Umhla kunye nexesha lilungelelaniswe phakathi kwipaneli ephezulu kwideskithophu ye-Gnome 3. Kunzima ...
1 2 3 4 ... 1,570 Okulandelayo
Ukukhangela kwe-3 izandla-mboniso - Umdlalo omdala olindelekileyo uvela kwi-limbo
I-Anthem yokufumana iziganeko zexesha elibizwa ngokuba yi-'Cataclysms'; Ulawulo lwe-PC kunye ne-UI Qalisa ukuhlaziywa kweeNkcukacha
I-NVIDIA GeForce I-RTX 2070 8 GB IGDDR6 Uhlolo lweKhadi le-Graphics FT. Isixhobo seMSI X ...
AMD Radeon VII I-7nm GPU yenza indlela yokuba ababuyekeze iBhenke yokuVavanya
I-Windows 10 19H1 iWindows iyakhupha i-Desktop Apps kwi-Windows Mixed Reality
I-Anthem iqhubekisa i-PS4 Pro kuneXbox One X, 4K Checkerboarding Isetyenziswe kwi ...
I-Windows 10 Updates Iphulo kwakhona kwakhona kwabanye abasebenzisi - Shintshela kwi-DNS ye-Google ukuya ...
UAsus uhamba nge-Android Pie kwi-Zenfone 5Z ifowuni: Nantsi indlela yokufaka
I-FaceTime bug ivumela abasebenzisi be-iPhone ukuba bayeke kwiintetho; I-Apple isenokuthatha isenzo
I-PUBG ihlaziya iqhosha le-#25 ngoku lihlala kwi-server yovavanyo: Bizon SMG, Canted Sight, Vikendi ...
I-WhatsApp yewebhu ikhetha ukukhetha umfanekiso-mfanekiso: Nantsi indlela yokuqalisa
I-Samsung Galaxy M10, intengo ye-M20, iindidi zokugcina izinto eziphambili ngaphambi kokuqaliswa
Abasebenzisi be-OnePlus be-6T bekhalaza ngebhetri ngokukhawuleza ngokukhawuleza: Ngaba kukho isisombululo sokulungisa ...
WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger ukuhlanganiswa: Kuthetha ntoni kubasebenzisi?
Imoji yeZUB ye-PUBG yesimo se-zombie iyatshitshisa, inzima kwaye iyona mcimbi wesigxina: Ukuphonononga